काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले आफूलाई पदोलोलुप भनेर आरोप लगाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै ‘पूर्व समूह छाडेकै भरमा आरोप–प्रत्यारोपको खेल भएको बताएका छन्।
पूर्वमाओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गजुरेलले नेकपाको पछिल्ला विवादमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूह छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै आएका थिए। गजुरेलले मन्त्री बन्ने लोभमा प्रचण्डलाई छाडेर प्रधानमन्त्रीको कित्तामा उभिएको भन्दै उनलाई प्रचण्डपक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ।
“मलाई अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख बन्नु पर्‍यो भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो। तर मैले पार्टीमा आफ्ना केही धारणा राखेको छु। त्यसको सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि राजनीतिक पद लिन्नँ भनेर जवाफ दिएको मान्छे हुँ,” देखापढीसँग गजुरेलले भने, “तर, अहिले मलाई उल्टै मन्त्री बन्न गयो, मन्त्रीको लोभमा फस्यो भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ।”
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टी सञ्चालनको विधि र प्रक्रियालगायतका विषयमा राखेको असहमतिको सम्बोधन नभएकाले राजनीतिक पदको प्रस्ताव आउँदा पनि अस्वीकार गरेको गजुरेलको दाबी छ।
“टोपबहादुर रायमाझीले ‘तपाईँलाई सभामुख बनाउन म पहल गर्छु’ भन्नसमेत आउनुभयो, तर अध्यक्षसँग केही कुरा राखेको छु। त्यो निरुपण नभएसम्म जान्न भनेपछि अरूलाई बनाउनु उपयुक्त हु्ने सुझाव दिएको थिएँ। अहिले मलाई मन्त्री खान गयो भनेर आरोप लगाउँछन्।”
तत्कालीन माओवादी कोटाबाट सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराले ‘रोशनी शाही प्रकरण’का कारण राजीनामा दिएपछि खाली भएको थियो। रिक्त सभामुख पद सम्हाल्न सुरुमै आएको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेपछि अग्निप्रसाद सापकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ।
“भृकुटीमण्डपको चियापान कार्यक्रममा पनि स्वयं अग्निजीले मलाई ‘तपाई सभामुख बन्नुहोस्, म जान्नँ’ भन्नुभएको थियो। मैले ‘तपाईँ नै जानुहोस्’ भनेर सुझाव दिएका थिएँ,” गजुरेलले स्मरण गरे, “टोपबहादुर रायमाझीले ‘तपाईँलाई सभामुख बनाउन म पहल गर्छु’ भन्नसमेत आउनुभयो, तर अध्यक्षसँग केही कुरा राखेको छु। त्यो निरुपण नभएसम्म जान्न भनेपछि अरूलाई बनाउनु उपयुक्त हु्ने सुझाव दिएको थिएँ। अहिले मलाई मन्त्री खान गयो भनेर आरोप लगाउँछन्।”
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचमा भएको ऐतिहासिक एकतालाई सहज तरिकाले टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्नेलगायत विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष गजुरेलले प्रस्ताव राखेको बताएका छन्। यसको जवाफ आफूले अहिलेसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।
“पटकपटक मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेको सबैलाई जानकारी छ। त्यो अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी नहुने त कुरा नै भएन,” गजुरेलले दुखेसो पोखे, “भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष बन्न मलाई प्रस्ताव आउँदा मलाई नबनाउनुस् बरु विप्लब (नेत्रविक्रम चन्द)लाई बनाउनुस् भन्ने मान्छे मै हुँ।” त्यतिखेर चन्दले अध्यक्ष बन्न नमानेपछि गजुरेललाई नै बनाइएकाे थियाे।
तत्कालीन नेकपा माओवादीमा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये चन्दले मात्रै राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीको जिम्मेवारी नपाएको भन्दै उनलाई दिन प्रस्ताव आफूले गरेको गजुरेलको दाबी छ।
एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा ६०–४० को भागवन्डा र ‘सहमतिमा एकता महाधिवेशन’ भनेर उल्लेख गरिएको विषयलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भुलेको गजुरेलको आरोप छ।
“माओवादीले पाएको ११ लाख मत हो। एमालेले झन्डै तीन गुणा बढी ३३ लाख मत पाएको थियो, तर पनि एकीकरण गरी नेकपा बनाउँदा ६०–४० को भागवन्डा गरिएको भुल्न हुन्न,” गजुरेलले देखापढीसँग भने, “सहमतिमा एकता महाधिवेशन के एमालेका लागि गरिएको थियो? थिएन। त्यो खासमा माओवादीका लागि उल्लेख गरिएको शब्दावली हो, तर अहिले त्यसलाई भुलिएको छ वा बंग्याउन खोजिएको छ।”
उनका अनुसार पार्टी सञ्चालनको क्रममा भविष्यमा कुरा नमिलेर पार्टी विभाजन हुने अवस्था आए कानुनअनुसार ४० प्रतिशत आवश्यक हुने अवस्था कायम रहोस् भनेर माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिइएको थियो।
“सहमतिमा महाधिवेशन भनेर उल्लेख गर्नुको कारण पनि माओवादीको हितका लागि नै थियो। नत्र प्रतिस्पर्धामा महाधिवेशनमा जाने हो भने नेकपामाभित्र पूर्वमाओवादीका कुन माओवादी नेताले चुनाव जित्छन्? महाधिवेशनमा सबै जित्ने त एमालेले नै हो किनकि एमालेसँग ६० प्रतिशत छ,” गजुरेलले खुलाए।
प्रचण्ड एकताको म्यान्डेटविपरीत गएका कारण आफू ‘अलि पर’ भएको भन्दै गजुरेलले गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ढंग नपुर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए।
“तीनजना मन्त्री बनाउँदा एकजना पूर्व माओवादीवाट हालेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री चुक्नुभएको छ,” गजुरेलले भने, “स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत तपाईँ जानुभयो भनेर मैले त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भनिसकेको छु।”
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता कार्य गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएर फर्केको उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित: बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ १६:१५
प्रचण्डले सभामुखको जिम्मेवारी दिँदा आफूले नलिएको गजुरेलको दावी छ।
अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझीले आग्रह गर्दा पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म राजनीतिक नियुक्ति नखाने अडान कसेको उनले स्मरण गरेका छन्।
सहमतिमा महाधिवेशन र ६०-४० को भागवन्डा पूर्वमाओवादीको हितका लागि गरिएको थियो, तर नेतृत्वले कुरा बुझेन।